दार्चुला अधिवेशन स्थलमा हानाहान, तीनजनाको अबस्था गम्भीर ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
दार्चुला अधिवेशन स्थलमा हानाहान, तीनजनाको अबस्था गम्भीर !
१४ मंसिर, काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज भएको दार्चुलाको जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनपछि अध्यक्षका दुई प्रत्यासीका समूह बीच झडप भएको छ। जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय नजिकको मतगणनास्थल दार्चुला विकास संगठनको हल नजिक झडप भएको हो।
।सभापतिका उम्मेदवार ललितसिह बोहरा र अमरसिंह धामी पक्षका बीच झडप भएको हो।धामी पक्षका एक नेताका अनुसार बोहराको समूहले धामी पक्षधरहरुलाई मतगणनास्थलमा प्रवेश गर्न नदिएपछि झडप भएको हो।
झडपमा धामी पक्षका केही कार्यकर्ताहरु घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरुमा राजेन्द्र बिष्ट, सुरेश बिष्ट, बसन्त बहादुर साउँदलगायत रहेका छन्। उनीहरुको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । यी तीन जना गम्भीर घाइते छन्।
नेपाली कांग्रेस दार्चुलाको कार्यसमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि सहमति जुटन नसकेपछि नेतृत्व चयनका लागि आज निर्वाचन भएको थियो । जिल्ला सभापतिसहित कार्यसमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि गरेर १२५ जना नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन।
जिल्लाका प्रमुख नेताहरू नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा भएकाले निर्वाचन प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। दिउँसो १२ बजेदेखि सुरु भएको मतदान ६ बजे सम्पन्न भएको थियो । कूल १ हजार ४२ मतदाता रहेकोमा ९ सय ५६ मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
पदाधिकारीसहित ४२ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति र २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि गरेर ६७ जना पदाधिकारी चयनका ९ सय ५६ जनाले मतदान गरेका थिए ।मत गणना सुरु हुने बेला दुबै पक्षका बीच झडप भएको हो।
अपाङ्गतर्फ महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उपेन्द्रप्रसाद मेहेता र देवेन्द्र पौडेल विजयी भएका छन्। भण्डारीले दुई कार्यकाल जिल्ला सचिव बनेर काम गरिसकेका छन् ।सुनसरीको चार निर्वाचन क्षेत्र मध्ये तीनमा संस्थापन पक्षले हार ब्यहोरेको छ।
पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको चुनावी क्षेत्रमासमेत क्षेत्रीय सभापतिमा संस्थापन इतर समूह विजयी भएको छ। तेस्तै, नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा भाग लिने गैरआवासीय नेपालीमाथि पार्टीको निर्वाचन समितिले विदेशी नागरिकता लिएकाको हकमा कडाई गरेको छ ।
पार्टीको निर्वाचन समितिको पत्र अनुसार विदेशी नागरिकता वा पासपोर्टभएका व्यक्ति नेपाली जनसम्पर्क समितिको सभापति, महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य हुन पाउने छैनन् ।नेपालमा प्रतिनिधि भएर भोट हाल्न जाँदा नेपाली पासपोर्टमा यात्रा गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ। इमान्दार मेडिया बाट